Ny androaniko | Martsa 2015
[Ankapobeny ] 21 Martsa, 2015 08:58
Andro ho an'ny Tononkalo anio.
... Ary nisy namana teo ankodimiran'
Ny sendrasendra, akia,
Nandramby zany tànako ...
Ny làlan'ny fitia
Mihirika ho fananako.
Eny, misy namana azoko hiankinana
Raha tojo ny fidinana,
Hanohy ny fiakarana.
[Ankapobeny ] 11 Martsa, 2015 14:16
Kianjan'ny kanto eo Mahamasina.
Mahafinaritra fa efa kely sisa izany dia hotokanana sy ho ampiasaina ity kianja ity. Ny hira gasy no tena omena sehatra betsaka ao. Tena ankafiziko ny hira gasy ka isan'ny mahafinaritra ahy itony tetikasa itony. Tsara ilay amporisihin'ny fitiavana ny kanto ka enga anie ho maro ny tetikasa toy itony, ary indrindra enga anie hahay hanaja ny zavatra atsangana toy itony isika malagasy fa isika izay koa manko annn.......
[Ankapobeny ] 06 Martsa, 2015 23:04
Harvey sy ny "Lotus"-ny
Mahafinaritra kosa itony vaovao itony zany an : Harvey Rabenjamina, 26 taona. Izy no namolavola ny endrik'ity Lotus Evora 400 ity.